चर्चीत पत्रकार सन्तोश देउवालाई यो के आइलाग्यो यस्तो ? अस्पताल’को बेड’बाट आ’यो य’स्तो ख’बर ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०४, २०७८ समय: १४:३१:४७
अहिले पछिलो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाले आफ्नो स्वास्थ्य खराब भएकोले अस्पताल’को बेडमा छन्। आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै म फेरि उठ्नेछु किनकी हजुरहरुको माया मसंग छ भन्ने स्टाटस लेखेका छन्।
सानैदेखी निकै नै मेधावी छात्रमा गनिएका सन्तोश कक्षामा सधै प्रथाम हुन्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने उनले पढेको सायद घर परिवारका सदस्यले समेत थाहा पाउदैनथे ।
प्रायागरि सन्तोश घरका सबै सदस्य सुतेको बेला पढ्थे । सानैदेखी चतुर्याइ स्वभावका दिनभरि बाहिर साथीहरुलाइ क्र्याम्बोर्डमा भुल्याउथे अनि आफुचाहि रातभरि पढ्थे ।
सन्तोशका बुबा नेपाल प्रहरिको अवकासप्राप्त ब्यक्ति थिए । नेपाल प्रहरिको अवकाश पस्चात सन्तोशका बुबा छोराछोरीको भविश्यको लागी वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । जब सन्तोश कक्षामा भर्खर मात्र प्रवेश गरेका थिए त’व उनको कि’ड्नी’मा स्टो’न भयो । अर्थात उन’को कि’ड्नि’मा ४२ ओटा स्टो’न भ’यो ।
त्यसपछि उन’को अ’प्रेस’न भ’यो । त्योबेलाको समयमा लगभग उनी छ महिना स्कुल जान पाएनन । जतिबेला उनी अस्पताल’को बेड’मा अफ्नै जी’वन’सङ्ग स’ङ’घ’र्स गरि’रहे’का थि’ए ।
उनी अस्पताल’को बे’ड’मा अ’नेक कुरा खेलाउदै उनेले अन्त्त आफ्नो मनलाइ आफैले स’म्हाले । उनको कि’ड्नि दुइपटक सम्म अ,प्रे,सन गर्नुपर्यो । अतः त्यस दिनदेखि उनी अहिलेसम्म उनी त्यही ड्या’मेज भएको कि’ड्नि लि’एर बा’चिरहेका छन ।